Iindidi - Uncwadi lweendaba | Iindaba zoNcwadi (Iphepha 5)
Indima yabasetyhini yavela kakhulu kwinkulungwane: kwinoveli yolwaphulo-mthetho, indima yabadlali abaphambili yatshintsha nangakumbi kwaye uLisbeth Salander sisiphelo solo tshintsho: umgwebi onobundlongondlongo kakhulu xa kufikwa ekuziphindezeleni kubundlobongela kwabasetyhini. .
U-Epreli usizisela iindaba ezininzi zokuhlela. Ndigxininisa ezi-4 ngababhali abanjengoMaría Oruña, uMaría Dueñas, iijini eziBlue kunye noArturo Pérez-Reverte.
Umphathi wenoveli yolwaphulo mthetho eNorway une-58 Matshi namhlanje. Ngomhla wama-29 yabona ukukhanya kwayo kokuqala, ngokuqinisekileyo kumnyama, e-Oslo. Ukubhiyozela, ndikhetha ingqokelela yamabinzana avela kwinoveli yesidalwa sayo esidumileyo, umgcini uHarry Hole.
"Indoda enxibe mnyama yayibaleka entlango, kwaye umpu wayemlandela." Ngamabinzana amabini anamandla aqala ngolu hlobo "Inqaba emnyama", isaga sikaStephen King umbhali ngokwakhe awugqala njengomsebenzi wobugcisa.
Umbhali waseScotland uPhilip Kerr usweleke izolo ngolwesiHlanu 23 ngenxa yomhlaza. Iindaba ezilusizi kakhulu nezingalindelekanga kubo bonke abathandi bohlobo olumnyama kwaye kunjalo kumawakawaka abafundi balo. UBernie Gunther uyinkedama.
NgoLwesihlanu weentlungu. Akukho nto ingcono kuneLola edumileyo kuncwadi oza kuhamba nayo ngalo mhla kunye nee-onomastics zazo zonke. Amabinzana avela kwiklasikhi nguVladimir Nabokov.
Sinelungelo kunye nolonwabo lokuba neBerna González Harbour, umbhali, intatheli kunye nomhlalutyi woluntu lwanamhlanje kuzo zonke iinkalo zebhlog yethu. I-González Harbour ingene ngomnyango omkhulu kwinoveli yolwaphulo-mthetho kunye noluhlu lwazo lwabacuphi olujolise kukhomishina uMaría Ruiz.
Kwenzeka ntoni koothixo beLizwe eliDala xa bezibona bengathembekanga, bebodwa kwaye bengenakuzenzela nto kwilizwekazi elingaqhelekanga kubo? Lo mbuzo yile nto wayezibuza yona uNeil Gaiman kwaye yayiyimvelaphi yomsebenzi wakhe omkhulu: "Oothixo baseMelika."
Inoveli ye-Gastronomic enabapheki njengabadlali abaphambili, ebali okanye eyintsomi, amabali anekhitshi njengeyona ndawo iphambili, iindawo ezizayo apho i-gastronomy idlala indima ekhokelayo, kunye nemisebenzi yoncwadi ebandakanya iiresiphi zezitya ezibonakala kuzo kumaphepha abo.
"Kwiintaba Zempambano" libali eloyikekayo le cosmic elibonisa indlela esingabalulekanga ngayo esiphakathini sendalo iphela. Yintoni eyoyikisayo malunga nenoveli kukubonakala kwayo njengengxelo yesayensi.
U-Edmundo Dantés, u-Count of Monte Cristo ongafiyo owadala u-Alexander Dumas, ubenobuso obuninzi kwifilimu nakwimiboniso kamabonakude. Ezi zi-6 zazo.
Ukuba uhlala ufuna ukufunda uHaruki Murakami, kodwa ungazi ukuba yeyiphi incwadi oza kuyikhetha, ndincoma kakhulu "Emva kobumnyama." Incwadana emfutshane kakhulu kodwa ininzi enokuyithetha.
Omnye unyaka omnye namhlanje sinexesha lokubonana nee-Oscars Awards ngobona busuku bubalulekileyo kwi-cinema. Siphonononge iincwadi ezisi-7 eziguqulelwe kwiscreen esikhulu kwaye saphumelela i-Oscar ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo.
Inyanga entsha, ukukhutshwa okutsha. Ngomhla kaMatshi kuvulwa ngezakutshanje nguVargas Llosa okanye uPamuk, kunye noLackberg noFerrante, kunye noIzaguirre noBarneda. Kwaye kunye neIbáñez enkulu. Into encinci yayo yonke into kuye wonke umntu.
Iya kuba ngo-Epreli. Uthungelwano lwe-AMC luye lwaguqula inoveli kaDan Simmons eyaziwayo eyimbali kunye neqhinga lokudlala kuthotho lukamabonwakude oluveliswe nguRidley Scott. Sijonga.
Ngomhla weKati yeHlabathi, ebhiyozelwayo namhlanje, ndiphonononga ezi zihloko apho iikati zazo zonke iintlobo ziphambili. Iyakhazimla, intle, yoyikisa kwaye ngumthombo wokhuthazo loncwadi.
Namhlanje, kwinqaku lethu malunga neengcebiso zoncwadi sikulethela ingcebiso emnandi yoncwadi: "Iinkumbulo ze-Idhún" nguLaura Gallego.
UNyaka oMtsha waseTshayina ngoku ubhiyozelwa, unyaka weNja. Ndivavanya izihloko zakudala, ezembali kunye nezimnyama malunga nelizwe lasempuma elinomdla kwaye linomdla.
UJean-Baptiste Adamsberg, umgcini owaziwayo waseFrance owenziwe nguFred Vargas, ubuya kwisihloko esitsha sothotho, Xa kuphuma inkunkuma. Siyawakhumbula amabali abo.
Ukusuka kuSherlock Holmes ukuya ePepe Carvalho ukuya eHercule Poirot, uPhillip Marlowe okanye iCormoran Strike yamva nje, sonke sinombono wento eyenziwa ngumcuphi wabucala kwiintloko zethu. Ngaba zikhona ngokwenyani?
SikwiCarnival. Iinqwelo, amaqela, ukuziphatha kakubi, ukuzonwabisa kunye nokufunda. Sijonga ezi ncwadi zisi-7 apho ii-carnival zi-protagonists ngeendlela ezininzi.
Namhlanje umbhali wenoveli waseNgilandi, uCharles Dickens, ugqiba iminyaka engama-206. Kwimemori yenkumbulo yakhe kunye nomsebenzi wakhe omkhulu kwaye obalulekileyo, ndikhumbula amanye amabinzana kwimisebenzi yakhe.
Umbhali waseMelika uJames Ellroy ubeyintshatsheli yePepe Carvalho Prize kumnyhadala weBarcelona Black Novel. Namhlanje ndibalisela ibali lam lothando nenja yaseMAD
Ngomhla we-2 kuFebruwari uphawula isikhumbuzo seminyaka engama-75 sokuphela kweMfazwe yaseStalingrad, umzuzu wokuthatha isigqibo kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Ndiphengulula ezinye izihloko malunga nedabi elidumileyo kwisixeko saseRussia kwiibhanki zeVolga.
UDonna Leon, owangena ezihlangwini zika-Agatha Christie kwisihloko sendlovukazi enkulu yolwaphulo-mthetho kunye nomthengisi ophambili emhlabeni wohlobo olumnyama kunye neenoveli zakhe ezingamashumi amabini anesithandathu kwimarike, uthathe isigqibo sokusebenzisa ezakutsha zazo, uMhlaba oseleyo, njenge iqonga ukusuka apho ugxeka imeko yeplanethi.
UDon Vicente Blasco Ibáñez ubhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe namhlanje. Wazalwa ngoJanuwari 29, 1867 eValencia. Ukubhiyozela ndidibanisa amabinzana kweyona misebenzi yakhe imele.
Ezi zinto zintsha zintsha ziyathengiswa phakathi kuFebruwari. Omnye wabadlali baseBritani uDaniel Cole kunye nomnye ozinikeleyo kuJuan José Millás. Zintuthuko ezimbini esele ndikwazi ukuzifunda nokucebisa.
Sithethile no-Ana Lena Rivera Muñiz kunye no-Fátima Martín Rodríguez, iTrrente Ballester Prize ka-2017 enikwe i-ex aequo ngoDisemba ophelileyo. Ababhali basixelela ngeendlela zabo, ulindelo kunye neeprojekthi.
Kwinqaku lethu namhlanje besifuna ukunika imbeko kuGeorge Orwell, umbhali owayenobuganga bokuthetha ngenkohliso yehlabathi ngelo xesha.
U-Amaia Salazar nguMhloli wamaPolisa aseNararra, wafunda eQuantico, kwiziko le-FBI. Ukwi-thirties yakhe, watshata nomkroli waseMelika, kwaye xa i-trilogy iqala, akanamntwana. Uphethe ixesha elidlulileyo, uyasinda.
Umbhali oliNgesi uSimon Beckett ubhale le tetralogy emnyama kumatyala ophando lwenzululwazi uDavid Hunter kwiminyaka elishumi yokuqala yale nkulungwane. Sijonga.
URobin, ophambili wabasetyhini kwiinoveli zikaJK Rowling, phantsi kwegama elinguRobert Galbraith, ujongeka njengonobhala kaPhilippe Marlowe kunabacuphi benoveli yenkulungwane yama-XNUMX.
Usuku lweeKumkani. Ukukhohlisa kunye nezipho. Kwaye abalinganiswa abangamawaka beencwadi. Namhlanje ndibalaselisa ezi zisibhozo apha. Mnyama, yindumasi kunye neklasikhi.
KwakungoJanuwari 1, 1818 xa kwakupapashwa u _Frankenstein okanye uPrometheus wangoku, umsebenzi owaphakamisa umbhali wawo, iBritane uMary Shelley. Siphinda siqwalasele ukugqwesa okudala kuncwadi.
U-2017 uyaphela kwaye ndithatha isitokhwe sezinye iinoveli ze-noir ezindoyisileyo kulo nyaka. Phezulu kwoluhlu ngamaVikings, amaTaliyane kunye namaGauls, kunye neeYankees kunye nabaseSpain.
Ayikho iKrisimesi ngaphandle kukaCharles Dickens. Kukho ifilimu entsha malunga nomlobi omkhulu waseNgilani kunye nendlela awayicebe ngayo ibali lakhe leKrisimesi.
Ukuphononongwa kweenoveli zokuqala ezi-6 kwiinoveli zelizwe nezamazwe jikelele zolwaphulo-mthetho ezathi zenziwa ngoJanuwari 2018. UFitzek, uFernández Díaz, uCastillo ...
Ubusika buyeza, elona xesha lililo lonyaka kum kwaye lelona lifanelekileyo lokufunda. Ndiziphonononga ezi ncwadi zisi-8 kunye naye njenge-protagonist yezihloko zabo.
Kweli nqaku ndisiya kumbhali ukuya kumbhali ukukhuthaza oogxa kunye nokwenza izindululo ezisisiseko ukuze iitekisi zabo zikubone ukukhanya.
UKirk Douglas, ilivo leyona Hollywood yakudala, uneminyaka eli-101 ubudala. Ukuphononongwa kweencwadi zakhe njengombhali kunye nabalinganiswa bakhe boncwadi.
Unyaka uphela kwaye ezincwadana zoncwadi zamva nje ziyasungulwa kule nyanga yee-sheet sheet. Ndijonga kwakhona ezi-5 zezi zihloko eziphuma ngoku.
Kwinqaku lanamhlanje loncwadi sihlalutya uBenito Pérez Galdós, oyena mmeli uphakamileyo wobunyani beSpanish. Ngomso siza kuthetha ngeLeopoldo Awu "Clarín".
Kwi-Actualidad Literatura sele sicinga malunga noluhlu oluya eSanta Claus kunye naMadoda amathathu aZilumko avela eMpuma. Ngubani ocela olu hlelo lwe-Star Wars?
URobert L. Stevenson ngomnye wababhali abadumileyo boncwadi ngalo lonke ixesha. Sele kudlule iminyaka eli-123 efile. Siphonononga umsebenzi wakhe.
Ukutshintshwa kwefilimu yakutshanje yokubulala kwi-Express Express, enye yeencwadana ezidumileyo zika-Agatha Christie, sele ikhutshiwe. Siphinda sihlolisise ezinye.
Usale kakuhle noPeter Berling. Umbhali we _The children of grail_ dies
UPeter Berling, igama elisisiseko kuncwadi lwembali, usweleke nge-20. Sijonga kwakhona umbhali wombhali woo-_Oonyana beGrail_.
Olunye ufundisiso olumnyama olu-5 lwangoLwesihlanu oMnyama. Ukudityaniswa kunye neendaba
Kukho ezinye ezi-5 zokufundwa kwethoni emnyama ukuthatha ithuba langoLwesihlanu oMnyama. Ukudityaniswa okubini nguLemaitre kunye noSilva kunye nokukhutshwa oku-3 okutsha nguConnelly, uManook noMytting.
"Ulwaphulo-mthetho lweli chibi", uloyiko kunye nefantasy evela kwisandla sikaGemma Herrero.
Sikunikezela "ulwaphulo-mthetho lweli chibi", nguGemma Herrero. Umjongi wokugqibela kwi-Amazon Literary Award 2017. Unkwantyo ngohlobo olusulungekileyo.
Ngalo uLwesihlanu oMnyama (owangenisa uMnyama ngoLwesihlanu) sibona ukhetho lweenoveli zolwaphulo-mthetho lomlenze omnyama ezinento entsha esanda kukhutshwa kule nyanga.
UJo Nesbo, umbhali osemthethweni waseNorway wolwaphulo-mthetho kunye neenoveli zabantwana, unike kolu dliwanondlebe iingcebiso ezili-10 zababhali bokuqala.
Amaxwebhu ngokusweleka kukaJohn Fitzgerald Kennedy, JFK, achaziwe. Sibona ezinye iincwadi zinomfanekiso wakhe ongumlingiswa ophambili okanye ngasemva.
Inyanga kaNovemba iinkwenkwezi kwezinye izihloko zeencwadi kwiminyaka eyahlukeneyo kunye nemixholo eyahlukeneyo. Siphonononga ezimbalwa.
Inyanga kaNovemba iqala kwaye iindaba ezinomdla zoncwadi ziyaphuma. Ezi zimbalwa. Kubafundi bazo zonke iintlobo kunye neencasa.
Inguqulelo yefilimu ye _The Snowman_, inoveli ethengiswa kakhulu kunazo zikaJo Nesbø, sele ikhutshiwe. Kwaye uHarry Hole wayengafanelanga lo mfanekiso ungathandekiyo.
U-Leo Demidov no-Alexei Korolev ngabaphandi baseRussia abenziwe ngababhali baseBritane uTom Rob Smith noWilliam Ryan. Siyabona ukuba bangobani.
UJim Thompson noJoseph Wambaugh ngamagama amabini akudala kwinoveli emnyama yaseMelika. Siphonononga imisebenzi yakhe emibini yobugcisa.
Sisondela kumbhiyozo weminyaka elikhulu yeRussian Revolution kwaye ndihlangule ababhali abathathu boncwadi lwabo kwimisebenzi yabo emithathu.
Nge-echoes yeNobel Prize kuLwazi lweBritish Kazuo Ishiguro kunye nobudlelwane nomdlalo bhanyabhanya, sijonga abanye ababhali abaphumeleleyo kwangolo hlobo lunye.
Ukubhengeza ingqele yasekwindla siya kuhambo olusuka eBerlin luye eHelsinki naseBeijing kwezi trilogies zintathu zimnyama, kodwa kunye nokuhlekisa.
I-Taschen Publishing House ipapashe amahlelo amatsha amnandi ezinye zeentsomi zakudala ngabazalwana bakaGrimm noHans Christian Andersen.
Unyanisile. Sekuyiminyaka engama-25 ukususela kuloo ncwadana. Ababhali uMurakami, uEllroy, Prachett, Moccia, Harris, Gordon, noJennings bapapashe ezi zihloko.
Kwinqaku lanamhlanje ndikuxelela ukuba yeyiphi imisebenzi emithathu endiyithandayo kakhulu yenye yeenkosi zoluhlobo loyikisayo: uStephen King. Ngaba uyavumelana nam?
Namhlanje sihlalutya isicatshulwa esifutshane esivela kwincwadi ethi "Los pazos de Ulloa" ebhalwe nguEmilia Pardo Bazán. Siza kubona iimpawu zeNdalo yelo xesha.
Kwinqaku lethu loncwadi namhlanje sikhumbula uEmilia Pardo Bazán, umbhali ofanelekileyo weSpanish Naturalism. Amabinzana kunye nomsebenzi wakhe.
Itreyila ye _50 ekhutshwe zizithunzi_ inikiwe, isihloko esivala eyona saga idumileyo yeminyaka edlulileyo. Ndenza uphononongo kuyo.
Ndijonga i-8 yezona ncwadi zithengwa kakhulu kwimbali kwivenkile yeencwadi. Kuzo zonke izinto ozithandayo zolu hlobo luthandwayo.
Sele kuyiminyaka engama-75 okoko kwapapashwa iNcwadi yokuqala yesihlanu, uthotho lweenoveli zabantwana kunye nabantu abadala abancinci ngumbhali wase-Bhritane u-Enid Blyton.
UPlinio, nguFrancisco García Pavón, elona polisa libalaseleyo eLa Mancha. Irhafu kumlinganiswa omkhulu wePavon, amabali akhe, okusingqongileyo kunye nabantu abamngqongileyo.
Iholide zidlulile kwaye lixesha lokuba ubuyele esikolweni. Zisixhenxe iincwadi ezintsha neziklasikhi ezijolise ebantwaneni nakubantu abancinci ukuba baqhubeke nokufunda.
Inxalenye yesibini yokufunda kwam ngoJulayi nango-Agasti. Ngeli xesha ndijongisisa izihloko zothando ezithathu endizifundileyo kwezi nyanga.
Phakathi kwezinye, ezi ibizizi-6 zokufundwa kwam ngoJulayi nango-Agasti. Ukuhlawula phakathi komnyama omnyama kunye nepinki engamanyaniyo ukumelana nobushushu.
Kwinqaku lanamhlanje sikuxelela into eyaziwayo njengebali lombhali kwaye yeyiphi umahluko okhoyo kwiintsomi ezidumileyo.
Iphoyisa kwinyanga_ yinto encinci evela ku-comic kaTom Gauld. Sijonga kwaye sijonga umsebenzi walo mbhali udumileyo.
Siphonononga iinoveli ezi-6 ngoku phakathi kweyona nto ithengiswa kakhulu kunye neefani zabasetyhini eziphumelelayo. Ukubuyela kwikhefu.
Ngelixa ndilinde iindaba zasekwindla, ndihambahamba kwiincwadi ezimbalwa ezinokubonwa kwiishelufa zehlobo zevenkile zeencwadi.
UPurita Campos, umbhali ka -Esther y su mundo_, ugqiba iminyaka engama-80. Sibhiyozela isikhumbuzo sakhe ngokujonga owona msebenzi wakhe ubalaseleyo kunye nomlinganiswa.
Namhlanje sizisa iindaba ezimnandi kubalandeli besaga sikaHarry Potter: Iincwadi ezimbini ezintsha zikaHarry Potter ziya kukhutshwa ngo-Okthobha.
Namhlanje sinento ekhethekileyo ekhethekileyo. Ugqirha Kit Harington, odumileyo uJon Snow ovela kuthotho oludumileyo _Game of Thrones_ uthetha nathi malunga nokufunda kwakhe.
_U-Snowman_, inoveli yesixhenxe kuthotho olwenziwe nguMkomishinala uHarry Hole, ngu-Jo Nesbø, ngoku ukwimo yokulungiswa kwefilimu. Ivulwa ngo-Okthobha.
UNaomi Novik uphumelele ibhaso likaKelvin 505 ngencwadi yakhe ethi "A Dark Tale" kwaye apha sixelela intetho yakhe kunye nezinye izimvo ezivakalisiweyo ngayo.
Ngenyanga enye kaJulayi, iAlexandros edumileyo eFrance, iiDuma, nazo zazalwa, zahlukene iminyaka engama-22. Sifunde ezinye zezivakalisi zakhe.
Iinoveli ezi-6 ezinoveli yolwaphulo-mthetho ezipapashwa ekwindla. Inkqubela phambili yokubonisa kwaye wenze imilomo yakho. Kubathandi bobumnyama.
Namhlanje kuphawula iminyaka emibini yokusweleka kombhali wase-Bhritane, uJane Austen. Siphonononga imisebenzi yakhe ebaluleke kakhulu kwaye ibalulekile.
Siphonononga amagama kunye neencwadi zabo zabanye ababhali abaphumeleleyo beAranjuez. Ukufumana ezinye iitalente.
Ushicilelo lwe-XXX lweVeki eNtsundu yaseGijon iyaqala, owona msitho ubalulekileyo wokubhala ehlobo. Siphonononga imisebenzi yabo.
Siphonononga ezi zihloko zintsha zintathu ezivela kubabhali abashushu: UKarl Ove Knausgård, Tana French noLuca D'Andrea. Inomdla wokufundwa kweeholide.
Yiminyaka engama-20 okokunyamalala kwabadlali uRobert Mitchum noJames Stewart, abasweleka bengekho mini. Sibona iincwadi ezimbini ezithetha ngabo.
Siphonononga amabali aneenkwenkwezi ezi-6 ezidumileyo ezivela kwinoveli zawo onke amaxesha. Ukuze basithumelele uncwadi oluhle.
Kwezi ntsuku kubhiyozelwa i-LGTB World Pride 2017 eMadrid.Siphonononga ezinye izihloko ezininzi ngalo mbandela.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaPearl S. Buck. Biography kunye nomsebenzi.
Namhlanje sijonga iinoveli ezi-6 zakudala kunye nezexesha langoku ekusenokwenzeka ukuba sasingazi ukuba zizii-epistolary.
Ukuphonononga amagama ama-4 ababhali bexesha lamaGalikhi kwimpumelelo yesizwe neyamazwe aphesheya ekufuneka eyazi.
Iincwadi ezintathu ukuthandana
Uthando aluze lubuhlungu ke namhlanje, kwi-Actualidad Literatura, besifuna ukucebisa iincwadi ezintathu ukuba sithandane nazo.
Iminyaka engama-40 yoTshintsho. Ezinye iincwadi malunga nalo mzuzu
Iminyaka engama-40 idlulile ukusukela nge-15 kaJuni kunyulo lokuqala lwentando yesininzi emva kolawulo lobuzwilakhe lukaFranco. Sibona ezinye iincwadi kuTshintsho.
Namhlanje sijonga iinoveli ezi-6 ezinezihloko zolwelo olona lubalulekileyo: amanzi. Iinoveli kunye nezakudala ziya kufakwa kweli hlobo lizayo.
Sibona iinoveli ezi-7 zamanoveli olwaphulo-mthetho ukulinda ihlobo. Amagama afana neWinslow, Hawkins, Rankin okanye Meyer athabatha izihloko ezitsha.
Izihloko ezi-7 zohambo kunye nabaphangi, ezivela kwiklasikhi nguSalgari okanye iSabatini, ngeSteinbeck okanye iDefoe kunye nokuphela kwamakhaya afana neVázquez-Figueroa.
Ikhulu leminyaka lokuzalwa kukaJohn F. Kennedy, omnye wabantu ababalulekileyo kule nkulungwane yama-7, ubhiyozelwa. Sibona iincwadi ezisi-XNUMX ngaye.
Iminyaka engamashumi amabini idlulile okoko kwenziwa umboniso weyona klasiki idumileyo kaJames Ellroy, LA Confidencial. Siwujonga ngokutsha lo msebenzi ubalulekileyo we-Mad Dog.
Olu fakelo lwesine lobuso bamapolisa nabecuphi lukhethekile. Namhlanje sinobuso obufanayo babini kubo, abo bakaGunnar Staalesen noDeon Meyer.
Kwinqaku lanamhlanje sikuxelela ukuba zeziphi ezona zinto ziphambili zangoku eSpain: amapolisa, ezembali, inkanuko, ukubonakalisa kunye neenkumbulo.
Esi sisihlandlo sesithathu sobuso obubekwe yifilimu nomabonwakude kumapolisa esiwathandayo nakubacuphi boncwadi.
Inxalenye yesibini yobo buso ifilimu nomabonwakude zibeke kumagosa ethu asebupoliseni nakubacuphi boncwadi. Ngaba bayasiqinisekisa okanye hayi? Masibone.
Namhlanje sijonga izihloko ezi-5 zezinto ezintsha zoncwadi lolutsha. Kuzo zonke izinto ozithandayo nabaphulaphuli. Kwaye ndikhomba ukufundwa kwehlobo.
Namhlanje sithetha kancinci nge "El Encanto", inoveli yokuqala kaSusana López Rubio. Yapapashwa ngo-Epreli odlulileyo kwaye siza kuyiphonononga apha kungekudala.
Iinoveli ezi-5 kuncwadi lwabantwana. Ukufundwa kwehlobo kwabancinci
Siphinda sihlolisise izinto ezi-5 zoncwadi lwabantwana zabafundi abancinci. Ngeli hlobo lizayo banokufunda kakuhle.
Sonke sicingela ubuso babalinganiswa boncwadi. Kwimeko yamapolisa kunye nabecuphi, umabonwakude kunye nomabonakude bajongene nokusibonisa abanye.
Namhlanje sijonga amabinzana angama-22 olwaphulo-mthetho, avela kutitshala wase-Bhritane u-Agatha Christie ukuya e-American Don Winslow. Kodwa zininzi.
Uphengululo lwe _Bull Mountain_, inoveli yokuqala ka American Brian Panowich, ireferensi entsha kwinto ebizwa ngokuba yi "country noir".
Usuku lomama luyeza. Nazi iincwadi ezi-6 zokunika oomama zonke izinto abazithandayo, iimeko kunye neendlela. Ngokuqinisekileyo sinokuyifumana ngokuchanekileyo.
Ngomso kupapashwa "Namhlanje kubi, kodwa ngomso ngowam" nguCompán Salvador ngu-Edpasa woMhleli. Inoveli ebekwe kwii-60s.
Iindaba. Izihloko zamva nje ezivela kuKristin Hannah kunye noGlenn Cooper.
Inoveli. Siphonononga izihloko zakutshanje ezivela kubabhali baseNyakatho Melika uKristin Hannah noGlenn Cooper, abaneencwadi ezintsha kwintengiso.
Abahlobo aba-4 abaneenkwenkwezi ezi-4 zemilenze kumabali ama-4 kwezi zihloko zisi-4 siziphakamisayo. Kubathandi bezilwanyana kunye nezinja kunye neekati ngokukodwa.
Iiklasikhi zembali esihlala sizibona ngePasika. Kodwa zisekwe kwinoveli. Ngaba sizifundile? Ngaba siyabazi ababhali babo? Sijonga kwakhona.
USherlock Holmes unobuso athi umfundi ngamnye amnike bona, uninzi lweenguqulelo zomcuphi owaziwayo owenziwe nguArthur Conan Doyle. Ukoyisa wonke umntu.
Sathetha ngezinto ezininzi noJo Nesbø e-Barcelona. UHarry Hole, uMacbeth, uKosmopolis kunye no-_La sed_, inoveli yakhe yamva nje, kwakhona ubalaseleyo.
UHarry Hole ubuyile kwi _La sed_, inoveli yeshumi elinanye kaJo Nesbø malunga nepolisa lakhe. Kwaye sekuyiminyaka engama-20 ukususela ekuqaleni. Sinikezela oku kubalulekileyo kuwe.
UBetty, inoveli yamva nje ebhalwe yi-Icelandic Arnaldur Indridason inxibelelana nesiko leklasi yohlobo lwe-noir malunga nalo mfazi ubulalayo. Siya kwamanye amagama.
Iingcuka zezinye zezilwanyana zoncwadi ezifumanekayo. Njengabaphikisi bokwenyani okanye iikhonsepthi ezingumfuziselo zihlala zibango elilungileyo.
Abo bantu bangakhange bafunde i- "Lazarillo de Tormes" baphakamise izandla zabo ... Ndiyathemba ukuba andiboni baninzi abaphakanyisiweyo. Ingcebiso yakudala!
Kwinqaku lanamhlanje sikubonisa into entsha eza kupapashwa ngo-Matshi 21 ngu-Espasa woHlelo: "Ukudityaniswa", okutsha okuvela kuCarlos del Amor.
_Logan_ ikhutshiwe, isihloko sakutshanje kwifilimu trilogy yomlinganiswa odumileyo uMarvel, siphinda sihlolisise uthotho lwee-comics zesalathiso.
Bona okanye ufunde. Ngamanye amaxesha sikhetha ukubona iinguqulelo zeemovie kunokuvula incwadi. Yinyani? Nayi le mizekelo yeeklasikhi ezintathu zaseFrance.
Inoveli _Ukuhlengwa_, ngu-American John Hart, sisihloko esimnyama ukufumanisa, ukuba ayikenziwa. Ndiyiphonononga ngokuzinikela.
I-Espasa yokuhlela iphehlelela "iArcadia" ngu-Iain Pears oza kupapashwa nge-7 ka-Matshi ngexabiso lentengiso ye-22,90 euro.
Sinikela le ncwadi intsha nguSol Aguirre, "Ngenye imini ayilulo usuku lweveki." Inoveli engenantlonelo eya kwenza ukuba ungcangcazele ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni.
Sikhumbula amabali ayoyikisayo yenkqubo yasentsomini _Historias_, ekhokelwa yintatheli kunye nombhali uJuan José Plans.
U-Haruki Murakami ubuyile kwaye wenza njalo ngokupapashwa kwencwadi yakhe ethi "Into endithetha ngayo xa ndithetha ngokubhala", eza kukhutshwa nge-4 ka-Epreli.
Namhlanje sinika ukhetho lweencwadi eziza kusebenza kwiimvakalelo kunye nabantwana. Siwahlule ngokobudala obucetyiswayo.
Ngo-Okthobha siza kubhiyozela iminyaka eli-100 yesiganeko esisisiseko sembali, iRussian Revolution yowe-1917. Sibona ezinye izihloko ngalo mbandela.
Bangabanye babahlobo ababalaseleyo. Kwaye zikwangabalinganiswa abakhulu boncwadi. Siphonononga ezinye zezinja ezikhokelayo kuncwadi.
Siqokelela amabinzana angakumbi oncwadi kubabhali abaphambili, kodwa ngeli xesha ngenzondo. Kulabo banomoya omncinci weValentine.
UPaulina Simons 'I-trilogy yeBronze Horseman iklasikhi yangoku yenoveli yothando. Siphonononga oku kufunda kufanelekile kuSuku lweValentine.
IOfisi yoBubi, isavenge sesithathu soMcuphi uCormoran Strike
"Iofisi yobubi", isavenge sesithathu somcuphi uCormoran Srtike. UGalbraith wenza konke okusemandleni akhe kwakhona kwesi sitolimende siphilayo.
Umnyhadala weBarcelona oMnyama weNoveli uvala uhlelo lwayo lwe-12. Siphonononga into abazinikele ngayo kwezi ntsuku. Ababhali, imbeko kunye nemisebenzi.
Namhlanje ngumhla wokuzalwa kukaPaul Auster, umbhali waseMelika kunye nomenzi wefilimu. Kwiminyaka engama-70 ephantsi kwebhanti lakhe, ungomnye wababhali abaphambili bolwaphulo-mthetho.
Iintsuku ezingama-25 ezingaqhelekanga kunye nomgcini we-Ricciardi, umlinganiswa omkhulu owenziwe ngumbhali wase-Neapolitan u-Maurizio de Giovanni.
Sikhumbula umbhali ongumFrentshi uJean-Claude Izzo kuhlobo lwakhe olumnyama oludumileyo kunye nomlinganiswa wakhe, uFabio Montale.
Umbhali waseScotland uCraig Russell, umdali weKhomishinala uJan Fabel kunye noDetective Lennox, uthetha ngokufunda kwakhe kwangoku kunye nomxholo wokubhala.
U-Edgar Allan Poe ujika i-19 namhlanje, nge-208 kaJanuwari. Sivuyisana naye kwaye simgcothile ngomzimba wakhe kunye nokubaluleka komsebenzi wakhe wokungafi.
U-Edward Fairfax Rochester ungomnye wabalinganiswa abangabalulekanga kwinoveli yothando. Yenziwe nguCharlotte Brontë, inobuso obuninzi kwifilimu.
Kwiminyaka eyi-13 ndafunda ezokuqala iincwadi ezaziphawula iindlela zam zoncwadi. Namhlanje, xa ndineminyaka eli-13 kwakhona, sele ndifundile ezinye ezimbalwa.
UJo Nesbø ubhalela abantwana. Iimpawu zeGqirha Proctor yakhe ziyimpumelelo njengomdlalo wakhe wabantu abadala. Bafumanise, baya kukumangalisa.
Siphonononge uKapteni Jack Aubrey kunye noGqr Maturin uthotho nguPatrick O'Brian. Izinto ezibalulekileyo elwandle ukuqala unyaka.
UCarrie Fisher wayengumlobi wescreen, umlweli wentlalontle kunye nombhali. Simgxothe singalindelanga kule veki. Siyalikhumbula icala lakhe loncwadi.
Kunzima ukukhetha phakathi kwazo zonke iinoveli zolwaphulo-mthetho ezifundwe ngo-2016. Zininzi, zahlukahlukene kwaye zilungile. Ndiza kunamathela kwizinto eziqhelekileyo kunye nenye entsha.
Iiklasi zakudala zikaDickens azisoze zasilela kule mihla. Kodwa umbhali omkhulu wamaNgesi wabhala amanye amabali eKrisimesi. Nazi ezinye zazo.
I-Sterling Hayden yayiyigolide enkulu yaseHollywood ephawulwe ngokuzingelwa kwabathakathi eMcCarthyite. Kodwa ngaphezu kwako konke wayengumatiloshe kunye nombhali odumileyo.
UDavid Baldacci uqala olunye uthotho ngomlinganiswa omtsha, uMcuphi u-Amos Decker, odityanisiweyo kunye no-hyperthymestic emva kwengozi embi kakhulu.
Inkumbulo kaMaría Pascual, umbonisi omkhulu wamabali abantwana kunye neekomikhi, kwisikhumbuzo sokufa kwakhe.
UKirk Douglas ubhiyozela ikhulu leminyaka kunye nobomi obonwabisayo kunye nemisebenzi kwimbali ye-cinema. Akukho xesha lingcono lokufunda ngobomi bakhe.
Ixesha elifanelekileyo lokukhumbula uDaphne du Maurier, umbhali wase-Bhritane ovelise iinoveli kunye namabali okuthandabuza, uloyiko kunye ne-gothic-romantics ngempumelelo enkulu.
UJuan Díaz Canales, omnye wabadali beBlacksad, uthathe inxaxheba kumhla wokugqibela 2 kwiintsuku ze-comiqueras, e-Fnac Callao, eMadrid.
IiDolls ezaphukileyo sisihloko sokuqala esineenkwenkwezi uJefferson Winter, ingcali yeeprofayili zengqondo. UJames Carol udala umlinganiswa ofanelwe kukuqwalaselwa.
Emva kwempumelelo yenoveli yakhe yokuqala, uSamuel Bjørk waseNorway kunye nabaphandi bakhe uHolger Munch kunye noMia Krüger bahambisana ne-Owl.
Ukuba ungumlandeli wentsomi, musa ukuphoswa yinoveli yokuqala kwisaga kaEthan Bush. Ukurhoxiswa okuqinisekileyo kwisandla sika-Enrique Laso.
Ukuba awukabinalo uvuyo lokufunda "iNkosana eNcinci", apha sicacisa ukuba kutheni kufanele uyifumane ngoku.
Sikwinyanga ka-Novemba kwaye izinto ezintsha ezilindelweyo kakhulu kule nyanga sele zifikile. Ababhali bayo: UZafon noLorenzo Silva.
Sikhumbula izihloko ezithathu zabalandeli beMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, kwiminyaka yokuthinjwa kweFrance ngamaJamani, Inkcaso yabo kunye namabali.
"Nemesis" kunye "noMnyama uDahlia." Ukuphindwaphindwa kukaNesbø kunye no-Ellroy
Izihloko ezibini ezivela kubaphathi beenoveli zolwaphulo-mthetho uJo Nesbø noJames Ellroy baphinde bakhutshwa kule nyanga: INemesis kunye neBlack Dahlia. Ungabaphosi.
Kwiminyaka engama-65, imvumi yaseBritane eyaziwayo yapapasha ibali lobomi bakhe. Impumelelo kunye nezithunzi, iGenesis, ii-anecdotes ... ezifunekayo kubalandeli abangenamiqathango.
UJosé Giovanni wayengumbhali owabonisa ngobomi babo babonisa ukuba amaxesha amaninzi ixesha elidlulileyo elinokukhokelela kwimisebenzi ebekekileyo yokubhala.
Kule nqaku sikubonisa iingcebiso ezi-5 zoncwadi: 5 iincwadi ezilungileyo zabantwana abancinci endlwini. Sindwendwela ivenkile yeencwadi namhlanje?
Abalibalekileyo sisihloko sesibini kwi-trilogy kaJohn Puller. Ityala elitsha lokuphantse kube ligosa elikhethekileyo lomkhosi wase-US.
UFalcó, inoveli yokugqibela kaPérez-Reverte, usibamba ngesandla somkhohlisi kwihlabathi lobugqwetha eSpain ngo-1936 ababesandula ukuthatha izixhobo.
USantiago Posteguillo kunye neetrilogies zakhe ezimbini eTrajan naseScipio yenye yeereferensi zesizwe kwinoveli yembali enikezelwe eRoma nakwimbali yayo.
Incwadi ekhuthaze ababulali abathathu kwaye 'yaphelisa' ubomi bukaLennon
Incwadi enye inxulumene ngokuthe ngqo nokubulala okubini kunye nokuzama kwesithathu. Incwadi ekuthethwa ngayo inokuba nefuthe elingalindelekanga ngababulali.
Iincwadi zakudala zoncwadi luka-Enid Blyton, umbhali wase-Bhritane obalaseleyo, baphinde bakhutshwa, kwaye ukuchaneka kwezopolitiko kwangena kwimibhalo emitsha.
I-quirk yekamva kuphela isindisa ubomi buka-JRR Tolkien kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala. Le mfazwe, ephantse yathatha ubomi bakhe kodwa yavuselela umsebenzi wakhe.
Iinqwelo-moya kweyona nqanawa idumileyo neyaziwayo kuncwadi lwehlabathi. Siqala iPequod. Siza kuzingela iminenga emhlophe.
Incwadi ethi "Damned United" ithathwa njengeyona ncwadi ibalaseleyo kwezemidlalo. Ibonisa ibali lomqeqeshi webhola uBrian Clought.
I-Actualidad Literatura yayizimase u-Okthobha u-4 umboniso kushicilelo lweSpanish "Ubabalo lookumkani" ebhalwe nguKen Liu.
UHarry uza kubuya kwinoveli entsha. Isihloko sayo, ukunxanwa (ukunxanwa), kuyaqhubeka kwintengiso yeAnglo-Saxon ngoMeyi 4, 2017.
UJason Lute usinika amahlaya akhe amabini malunga neBerlin ngamaxesha oxinzelelo awaphawula iRiphabhlikhi yeWeimar. Ixesha eliphambili lokuba yiNazism.
UPatrick Süskind ngomsebenzi wakhe "Amafutha" awenzi ukuba ufunde ngombono wevumba. Isibonisa, ngale ndlela, umhlaba wevumba lokwenyani nelibulalayo.
Isikhokelo esincinci malunga nomsebenzi wokubhala kaSir Terry Pratchett, isikhokelo esifanelekileyo ukuba umntu akafuni kulahleka phakathi kwemisebenzi kunye neencwadi zeDiscworld ...
Ukusuka kwi-Actualidad Literatura sibonisa ezinye zeencwadi ezikhoyo ngoku ukongeza kuluhlu lokufunda olunyanzelekileyo lootitshala
Funda u-Unamuno ukuze ufunde ukuba ngutata olungileyo
Inoveli "Uthando kunye nokufundisa" inokuba yeyona ncwadana ibalaseleyo yabazali ukuba babafundise ngokufanelekileyo abantwana babo kude nemidla yabo njengabazali.
Ukubuyela esikolweni "neHobbit" kubhaka.
Ngaba iHobbit yincwadi efanelekileyo ukuqala ukufunda? Ngaba inokuba nomtsalane koyena mncinci? Ngaba ngenene yincwadi eyindinisa?
Ngokuqinisekileyo kwilayibrari yakho uneencwadi ezithile onomdla kuzo. Ndixelele, zeziphi iincwadi ezi-5 onokuzigcina kwintlekele yokusingqongileyo?
UGoogle unikezela i-doodle yakhe kwincwadi «Ibali eliQhelekileyo»
Namhlanje, nge-1 kaSeptemba, sifumene umfanekiso omtsha kwinjini yokukhangela kuGoogle, kwaye ...
Le yindlela uJK Rowling acinga ngayo ngabalinganiswa beSaga kaHarry Potter
Bobabini abo bafunde ezinye okanye zonke iincwadi zeJK Rowling zeHarry Potter saga kunye ne ...
Indlu yokupapasha yaseSalamandra, ejongene nokupapasha isaga saseHarry Potter eSpain, iya kupapasha "uHarry Potter kunye nelifa eliqalekisiweyo" nge-28 kaSeptemba
Umbono weZihlalo eziXabiso, into engeyiyo nguNeil Gaiman
UNeil Gaiman upapashe inoveli engeyonyani ebizwa ngokuba yiView yeZitulo eziPhukileyo, umsebenzi odibanisa onke amava kunye nemibhalo kaNeil Gaiman.
UJK.Rowling ubuza abalandeli bakhe ukuba bangavezi ulwazi ngesiqwenga "sikaHarry Potter kunye noMntwana oqalekisiweyo"
I-JKRowling yenza ividiyo apho ibuza abalandeli bayo ukuba, xa beyokubona "umntwana oqalekisiweyo" angatyhili nto ngecebo lakhe kwihlabathi liphela.
Ilifa lomhlaba, inxenye yesibini yeCathedral yoLwandle izakushiya ngo-Agasti
Abadla ilifa lomhlaba baya kuba yinxalenye yesibini yeLa Catedral del Mar, umsebenzi oza kuqhubeka nge-medieval Barcelona ...
Umbhali uGeorge RRMartin uthumela isahluko kwincwadi yakhe yamva nje, "Imimoya yasebusika," kwibhlog yakhe ukuphelisa amanye amarhe.
Umpapashi unika umzobi waseSweden uJan Löö? Isiphelo: nokuba ungatshintsha iincwadi ukuphelisa iingcinga okanye uzithengise.
Inqaku lomhleli uEpasa upapasha «Iindidi. Iphupha likaKumkani »nguElizabeth Massie
Ngomhla we-3 kaMeyi, i-Edpasa yoHlelo yapapasha inoveli yezembali ngumbhali u-Elizabeth Massie, enesihloko esithi “Iindibano….
Inqununu yesikolo sabucala eNgilane ibhengeze ukuba ezinye zeencwadi zamaphupha ezaziwayo ziyingozi kubantu abancinci
Bathi ukwazi imbali kuthintela ukwenza iimpazamo ezininzi zangoku, okanye ubuncinci, kwaye ndibuyela ku ...
Ziinyanga ndinencwadi ethi "Como el sol para las flores" ngu-Irene Villa opapashwe ngo ...
«UDon Quixote de la Mancha» ayisiyoncwadi yabantu abadala kuphela kwaye bubungqina boku kulandelayo ...
Usuku lweNcwadi lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe
Namhlanje, umhla we-2 ku-Epreli, luSuku lweeNcwadi lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe, olukhethwe njengembeko kumbhali waseDenmark uHans Christian Andersen.
Abancinci banethamsanqa ngesixa semithombo esinayo namhlanje enkosi ku ...
Ngemihla ebaluleke njengaleyo sihlangabezana nayo (iVeki eNgcwele) kwaye ngaphandle kwenjongo yokucaphukisa nokuba lunqulo ...
Ndinoluvo (ngokuqinisekileyo njengoninzi lwenu), ukuba uluntu luyatshintsha lube ngcono okanye ...
Ezi ncwadi zisi-7 zabantu abangafundanga ziya kuba zizindululo ezilungileyo zokuqalisa ukufunda kwaye uzicwilise kwihlabathi leeleta.